तपाईं यूटा आफूलाई फेला पार्न र यसको इलाकामा स्थित पाँच पार्कमा मार्फत एउटा यात्रा मा जाने भने तपाईं मंगल ग्रह मा उतरा छन् कि छाप प्राप्त हुन सक्छ। यी पार्क एक शानदार प्राकृतिक आश्चर्य हो। साल्ट लेक सिटी र लस भेगास बीच यात्रा को दस दिनमा, तपाईं Arches, क्यान्योनल्याण्ड्स, कैपिटल प्रवाल, Bryce घाटी र सियोन समावेश पाँचवटा पार्क प्रत्येक भ्रमण गर्न सक्षम हुनेछ। प्रभावशाली उच्च mesas देखि शुरू र गहिरो canyons संग समाप्त, सबैलाई जो विश्वास गर्न कठिन छ अस्तित्व यो असली पार्क मा आफु को लागि केहि पाउनुहुनेछ। र यो तपाईं पनि नयाँ र रोचक को धेरै कुरा सिक्न चाहनुहुन्छ भने सक्षम हुनेछ, र तपाईं पनि पार्क प्रत्येक व्यक्ति मार्फत जान सक्षम हुनेछ भनेर ढुक्क हुन सक्नुहुन्छ, बस वन्यजन्तु वा हरियो क्षेत्र, र पूर्ण राष्ट्रिय पार्क छैन भन्ने तथ्यलाई दिइएको पनि यसलाई यदि विकल्पहरू सीमित छन्। तपाईं निश्चित यात्रा को लागि गन्तव्यहरू को सूचीमा थप्न गर्नुपर्छ, मात्र यी पाँच पार्क, तर पनि त्यहाँ हुनेछ जब तपाईं भ्रमण गर्नुपर्छ भनेर केही विशिष्ट आकर्षण।
साल्ट लेक सिटी देखि मोआब गर्न सडक
Arches र क्यान्योनल्याण्ड्स - साल्ट लेक सिटी एक यात्रा मोआब जाने पछि, कि दुई राष्ट्रिय पार्क को अन्वेषण लागि आफ्नो आधार हुनेछ। तपाईं मोआब जाँदा, तपाईंले असामान्य सुन्दर लाल रक formations र mesas नोटिस हुनेछ।
Arches राष्ट्रिय निकुञ्ज मा डबल आर्क
को Arches राष्ट्रिय निकुञ्ज, क्षरण सेना मार्फत गठन थिए जो दुई भन्दा बढी हजार प्राकृतिक arches, छन्। दोहोरो कट्टर एक साधारण आधार छ कि दुई Arcs बनेको। सबै पक्ष तिनीहरूलाई हेर र आनन्द को एक अर्थमा संग प्रेरित।
Arches राष्ट्रिय निकुञ्ज मा अलंकृत आर्क
यूटा कम्तीमा दस मिनेट खर्च पछि, तपाईं सबै भन्दा अधिक संभावना पहिले नै यो कट्टर, त्यो मिसिन कोठा मा देखा थाहा छ। तर तपाईं व्यक्तिमा यो भ्रमण भने, यो कसरी ठूलो निश्चित गर्नुहोस्। यो कुञ्जी राज्य आकर्षण गर्न पूर्व एक पाँच-किलोमिटर पैदल मार्ग द्वारा पुग्न सकिन्छ, तर तपाईं सँगसँगै सूर्य देखि लुकाउन कतै हुनेछ देखि, सकेसम्म छोड्न हुँदैन।
Arches राष्ट्रिय निकुञ्ज मा रक चित्रकला
तपाईं एक रक कला प्यानल पार कट्टर बाटो मा, भारतीय ute Paiute द्वारा वा सत्रौँ शताब्दीमा त्यहाँ बाँकी। चित्रकला सिद्ध अवस्थामा छ, र यो सम्झना गर्न असम्भव छ।
Arches राष्ट्रिय निकुञ्ज मा परिदृश्य आर्क
तपाईं निश्चित यसलाई पतन अघि यो कट्टर हेर्न चाहन्छु। यो पछिल्लो केही शताब्दीपछि समयमा पत्थर को केही प्रभावशाली टुक्रा खस्यो। दृश्य एक जियोलोजिकल बिन्दुबाट, को कट्टर चाँडै अवस्थित गर्न बन्द हुनेछ। तर रूपमा आवश्यक लामो, यो सबैभन्दा लामो कट्टर संसारमा को शीर्षक खुलिरहेको छ।
Arches राष्ट्रिय निकुञ्ज एउटा सन्तुलित रक
चालीस मिटरको उचाइ सम्म हेर्न - र तपाईंले जो cliff माथि teetering छ 3600-टन पत्थर, देख्ने। तपाईंले यसलाई पार्क गरेको मुख्य सडक नजिक छ किनभने यो आकर्षण हेर्न छुट्टै बाटो जान आवश्यक छैन।
क्यान्योनल्याण्ड्स राष्ट्रिय निकुञ्ज स्वर्गीय द्वीप
जमीन माथि 300 मीटर को ऊंचाई मा तदनुसार एक Mesa भनिन्छ। तपाईं मुख्य सडक बाट हटना र छुट्टै मार्गमा 3-4 मी पास भने, तपाईं अविस्मरणीय दृश्य आनन्द उठाउन सक्छौं।
क्यान्योनल्याण्ड्स राष्ट्रिय निकुञ्ज मा Mesa आर्क
मार्ग आफ्नो विचलन आधा घण्टामा बाटो समयमा तपाईं खाडी हावी कि कट्टर देख्नेछन्। यसलाई माध्यम खोज्दै, तपाईं नदी द्वारा फ्रेम मरुभूमिमा, र सुन्दर हिमालहरू देख्न सक्छौं।
कैपिटल प्रवाल राष्ट्रिय निकुञ्ज मा मार्ग ग्रैंड धो हिड्ने
कैपिटल प्रवाल - यो यूटा मा कम्तिमा चिरपरिचित राष्ट्रिय निकुञ्ज छ, तर यो तपाईं यसलाई भ्रमण हुँदैन भन्ने होइन। क्यान्योनल्याण्ड्स मा घाटी अन्वेषण पछि तपाईं घाटी ग्रैंड धो तल पालना गर्न सक्नुहुन्छ। को घाटी पर्खालहरु असी फर्श को एक उचाइ गर्न उठ्नेछ, र यहाँ तपाईं निश्चित स्वागत छाया पाउनुहुनेछ।
कैपिटल प्रवाल राष्ट्रिय निकुञ्ज मा बगैचा
तपाईंले मरुभूमि र चट्टानहरु आफ्नो समय खर्च, तपाईं खुशी greenery हुनेछु, र तपाईं सजिलै कैपिटल प्रवाल मा पाउन सक्नुहुन्छ। प्रारम्भिक settlers मर्मनहरूले को उन्नाइसौँ शताब्दीमा यहाँ बगीचहरुमा लगाए, र राष्ट्रिय निकुञ्ज सेवा आज तिनीहरूको हेरविचार गर्न जारी छ। पर्यटकहरू यस्तो निःशुल्क खुबानी र स्याउ रूपमा पाकेको फल स्वाद गर्न सक्छन्। तथापि, तपाईं के तपाईं संग बोक्न चाहनुहुन्छ फल प्रत्येक किलोग्राम लागि एउटा सानो शुल्क तिर्न हुनेछ। तपाईं तालिका जाँच गर्नुहोस् यदि, तपाईं Rangers बगीचहरुमा को इतिहास बारे व्याख्यान गर्न जान सक्नुहुन्छ।
Bryce राष्ट्रिय निकुञ्ज घाटी मा Bryce बिन्दु
पार्क Braichev घाटी कुनै अन्त को पातलो उच्च रक formations। तपाईं सबैभन्दा लोकप्रिय जो को Bryce बिन्दु हो विशेष अंक, एक किसिम ले पार्क को अविस्मरणीय दृश्य आनन्द उठाउन सक्छौं।
पैदल मार्ग नाभाजो राष्ट्रिय निकुञ्ज Bryce घाटी
तपाईँले माथि पार्क हेर्न रूपमा, त यो तल देखि अन्वेषण गर्नुहोस्। यो पार्क को लगभग सबै प्रमुख आकर्षण हेर्न नाभाजो र राज्य बगैचा को पैदल यात्रा ट्रेल्स align।
सियोन राष्ट्रिय निकुञ्ज मा Emerald पूल
तपाईं निश्चित भएको Emerald पूल गर्न हिंड्न गर्न आवश्यक छ। तपाईं रातो चट्टान formations र हरियो पार्क सियोनका एक अविश्वसनीय विपरीत सिक्न रूपमा, तपाईं द्वारा पानी आराम खुसी छन्।
सियोन राष्ट्रिय निकुञ्ज मा नदी साथमा हिड्नुहोस्
यो पैदल यात्रा मार्ग ध्यान, उहाँलाई जान लागि सजिलो र सजिलो छापिएको। कारण यो संभावना छ पानी गर्न मार्ग को निकटता गर्न पनि तापमान को उत्तेजक दिनमा यहाँ पार्क को अन्य भागहरु मा भन्दा धेरै कम हुन्छ। तपाईं यहाँ यस्तो मृग रूपमा झुन्डिएको उद्यान र जंगली जीवन देख्न सक्छौं।
सियोन राष्ट्रिय निकुञ्ज मा Narrows
तपाईं vymoknut गर्न तयार हुनुहुन्छ? तपाईं जो साथ नदी तपाईं जान्छ अघिल्लो पैदल मार्ग, को अन्त पुग्न गर्दा, घाटीहरू, यो पार्क को सबै भन्दा प्रसिद्ध भाग हिंड्न तयार। यहाँ तपाईँले vymoknut तयार हुनु आवश्यक छ, र केही अवस्थामा पनि पौडी खेल्न।
सियोन राष्ट्रिय निकुञ्ज मा अवतरण स्वर्गदूतहरू
अक्सर, यो पैदल यात्रा मार्ग एक दिन outing लागि संयुक्त राज्य अमेरिका मा सबै भन्दा राम्रो रूपमा मान्यता छ। यो बन्द छ, र पाँच घण्टा पछि फिर्ता तपाईंलाई सुरू जहाँ आउँछन्। तर यो समयमा तपाईं जमीन माथि लगभग 500 मीटर को एक उचाइ गर्न उठ्नेछ र अविश्वसनीय दृश्यहरु पाउनेछन्।
Galla Placidia को दाहसंस्कार: विवरण, इतिहास। राभेन्ना आकर्षण
Wrangel द्वीप प्रकृति रिजर्व, रूस, जलवायु, स्थान को नक्सामा स्थान। जीव र Wrangel द्वीप को वनस्पतिहरूको
ब्रेस्ट क्षेत्र। ब्रेस्ट क्षेत्र शहर
बस, रेल, विमान: तेल अवीव देखि Eilat प्राप्त गर्न कसरी। तेल अवीव देखि Eilat दूरी
ओडेसा कहाँ के यो प्रसिद्ध छ, र
अक्टोपस कसरी बनाउने?
अमेरिकी अंग्रेजी: विशेषताहरु
समस्या बिना रोजगार
गेस्ट हाउस "वसन्त" (Anapa, Dzhemete)। अतिथि समीक्षा
Multivarka मा भरी खुर्सानी तयार "रेडमन्ड"